Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda dalka Ukraine
Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda dalka Ukraine
Ciidamada ruushka ayaa gudaha u galay magaalada Melitopol ee dhacda koonfurta bari ee gobolka Zaporizhzhya, ee dalka Ukraine, sida ay sheegtay wasarada difaaca ee ruushka.
Ruushka ayaa la shegay in uu weerarka Melitopol u adeegsaday gantaalaha nooca loo yaqaano Cruise iyo gujisyada badda hoosteeda quusa.
Wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamada moscow ee bartilmameedsaden boqolaal kamida kaabayaasha dhaqaalaha iyo difaaca Ukraine.
Dhankooda cidamada Ukraine ayaa sheegay in magaalada Kharkiv ay dib uga gurteen ciidamada ruushka kuwaas oo sacadihii la soo dhaafay ku sugnaa.
Ruushka ayaa curyaamiyay in ka badan 800 oo ah goobaha kaabayaasha milatariga Ukraine ilaa hadda, wasaaradda difaaca ee Moscow ayaa sheegtay.
Afhayeenka wasaaradda Igor Konashenkov ayaa sheegay in la burburiyeen 14 garoon diyaaradeed oo militari ah, 19 ka mid ah xarumaha taliska, 24 gantaalada S-300 ee lidka diyaaradaha iyo 48 saldhigyada Raadaarka. Intaa waxaa dheer, siddeed doonyood oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Ukraine ayaa la garaacay, ayuu yidhi Igor .
Dagaalka Ukraine iyo Russia ayaa galay maalintiisa saddexaad, waxaana wararkii ugu danbeyey ka imanayo ay shegayaan in ciidamada ruushka ay gudaha ugaleen magalada kyiv.
Madaxweynaha Ukriane Zelenskyy, ayaa ku gacan sayray saaka dalab uga yimid Maraykanka oo ah in loo soo diro diyaarad uu kaga baxo dalkiisa balse Volodymyr Zelenskyy ayaa sheegay in uu u baahan yahay lidka taangiyada oo aanu baahnayn diyaarad uu ku baxsado.
Wadamada rer galbeedka ayaa illa iyo haatan jawaab cad anan ka bixinin werarka ruushka uu ku qaaday Ukraine,xili uu moscow ay wacad ku martay ina ay hadii ay soo faro galiyaan galbeedka ay cawaaqib kala kulmi donaan.